Nhanganyaya yekufunga nekuparadzwa - Shoko reShoko
Nhanganyaya yekufunga nekuparadzwa
Chitsauko I cheFUNGA neDESTINY
Ichi chitsauko chekutanga che Kufunga Nekupedzisira rakagadzirirwa kusuma kwauri chete mashoma ezvidzidzo izvo bhuku rinotarisana nazvo. Zvizhinji zvezvidzidzo zvinoita sezvisinganzwisisike. Zvimwe zvacho zvinogona kushamisa. Iwe unogona kuona kuti vese vanokurudzira kufunga kune kufunga. Sezvo iwe paunojairana nepfungwa, uye uchifunga nzira yako kuburikidza nebhuku racho, iwe uchaona kuti iro rinowedzera kujekesa, uye kuti iwe uri mukugadzirira kuvandudza kunzwisiswa kwezvimwe zvakakosha asi kusvika zvino zvisinganzwisisike chokwadi chehupenyu - uye kunyanya nezvako .
Bhuku rinotsanangura chinangwa chehupenyu. Icho chinangwa hachisi chekungowana chete mufaro, kungave kuno kana kunotevera. Uye zvakare "kuponesa" mweya wemunhu. Chinangwa chaicho chehupenyu, chinangwa chinozogutsa zvese pfungwa uye chikonzero, ndeichi: kuti mumwe nemumwe wedu achange achifambira mberi zvishoma nezvishoma mumadhigirii akakwirira mukuziva; ndiko kuti, kuziva zvakasikwa, uye mukati uye kuburikidza uye kupfuura neakasikwa. Nemasikirwo zvinoreva zvese izvo izvo munhu anogona kuitwa kuti azive kuburikidza nepfungwa.
Iri bhuku zvakare rinokuzivisa iwe pachako. Inokuunzira iwe meseji nezve iwe pachako: chako chisingazivikanwe pachako chinogara mumuviri wako. Zvichida wakagara uchizviratidza iwe uye semuviri wako; uye kana iwe ukaedza kufunga nezvako iwe saka saka funga yako yemuviri mashandiro. Nekumanikidza kwetsika iwe wataura nezve muviri wako sa "ini", se "ini". Wakajaira kushandisa zvirevo zvakaita sekuti "pandakazvarwa," uye "pandofa"; uye "ndakazviona ndiri mugirazi," uye "ndakazvizorodza," "ndakazvicheka," zvichingodaro, apo muchokwadi uri muviri wako waunotaura nezvazvo. Kuti unzwisise zvauri unofanira kutanga waona zvakajeka musiyano uripo pakati pako nemuviri waunogara. Ichokwadi kuti iwe unoshandisa izwi rekuti "muviri wangu" nekukurumidza sezvaunoshandisa chero cheavo vangotaurwa zvingaratidza kuti hauna kugadzirira zvachose kuita uyu musiyano wakakosha.
Unofanira kuziva kuti hausi muviri wako; iwe unofanirwa kuziva kuti muviri wako hausi iwe. Iwe unofanirwa kuziva izvi nokuti, kana iwe uchifunga nezvazvo, iwe unoziva kuti muviri wako wakasiyana kwazvo nhasi kubva pane zvaive apo, muhuduku, iwe wakatanga kuzviziva. Mumakore awakagara uri mumuviri wako wave uchiziva kuti zvave zvichichinja: pakupfuura kuburikidza nehucheche hwake uye kuyaruka uye huduku, uye mumamiriro ayo ezvinhu iye zvino, zvakachinja zvikuru. Uye iwe unoziva kuti semuviri wako wakakurira uko kwave kuri kuchinja zvishoma mumaonero ako enyika uye maonero ako nehupenyu. Asi mukati mekuchinja uku uku wakaramba uri iwe: ndiko kuti, iwe wakanga uchizviziva iwe uri munhu mumwe chete, zvakafanana neni, nguva yose. Kufungisisa kwako pamusoro pechokwadi ichi chiri nyore kunokumanikidza kuti uone kuti iwe zvechokwadi hausi uye haugone kuva muviri wako; pane kudaro, kuti muviri wako muviri wenyama iwe waunogara; mararamiro aunoita iwe uri kushanda; mhuka yaunenge uchiedza kunzwisisa, kudzidzisa nekuziva.
Iwe unoziva kuti muviri wako wakauya sei pano pasi; asi kuti wakauya sei mumuviri wako hauzive. Hauna kupinda mairi kutozosvikira imwe nguva mushure mekuzvarwa kwayo; gore, pamwe, kana makore akati wandei; asi nezveichi chokwadi iwe unoziva zvishoma kana kusaziva, nekuti ndangariro yako yemuviri wako yakatanga chete mushure mekunge wapinda mumuviri wako. Iwe unoziva chimwe chinhu nezve izvo zvinhu izvo wako unogara uchichinja muviri wakaumbwa; asi zvauri zvauri hauzive; hausati wave kuziva sekuri zvauri mumuviri wako. Iwe unoziva iro zita iro nemuviri wako unosiyaniswa nemitumbi yevamwe; uye izvi iwe wakadzidza kufunga sezita rako. Izvo zvakakosha ndezvekuti, iwe unofanirwa kuziva, kwete zvauri sehunhu, asi zvauri iwe semunhu-uchizviziva iwe, asi usati uchiziva sewe, hunhu husina kuputsika. Iwe unoziva kuti muviri wako unorarama, uye iwe unotarisira zvine musoro kuti uchafa; nekuti ichokwadi kuti munhu wese mupenyu mupenyu anofa nenguva. Muviri wako wakava nemavambo, uye uchava nemagumo; uye kubva pakutanga kusvika pakupedzisira inozviisa pasi pemitemo yenyika yezvinhu, yeshanduko, yenguva. Iwe, zvakadaro, hausi nenzira imwecheteyo pasi pemitemo inobata muviri wako. Kunyangwe muviri wako uchichinja icho chinhu chakaumbwa kwazvo kazhinji kupfuura iwe paunochinja mapfekero aunopfekedza iwo, hunhu hwako haushanduke. Iwe unogara wakafanana newe.
Sezvaunofungisisa chokwadi ichi chaunowana kuti, zvisinei iwe ungaedza, haugoni kufunga kuti iwe pachako uchazombopera, chero kupfuura iwe unogona kufunga kuti iwe pachako wakambove wakatanga. Ichi ndechokuti kuziva kwako hakuna kutanga uye kusingaperi; iye chaiye ini, Izvo zvaunofunga, hazvifi uye hazvichinji, nekusingaperi kupfuura kusvika kwechiitiko chekuchinja, kwemazuva, erufu. Asi izvo izvi zvisizvo zvisingazivikanwi iwe, iwe hauzive.
Kana iwe ukazvibvunza iwe, "Chii chandinoziva kuti ini ndiri?" kuvapo kwehunhu hwako kunozopedzisira kwaita kuti iwe upindure neimwe nzira yakadai seiyi: "Chero zvazviri ini, ndinoziva kuti zvirinani ini ndinoziva; ini ndinoziva chero kuziva." Uye uchienderera mberi kubva pachinhu ichi unogona kuti: "Saka ndinoziva kuti ndini. Ndinoziva, uyezve, kuti ndini iye; uye kuti handisi mumwe. Ndinoziva kuti ichi chiziviso changu chandinoziva-- "hunhu uhwu hwakasarudzika nehunhu hwandinonzwa zvakajeka - haushanduke muhupenyu hwangu hwese, kunyange hazvo zvimwe zvese zvandinoziva zvichiratidzika kunge zviri mukuchinja nguva dzose." Uchienderera mberi kubva pane izvi unogona kuti: "Ini handisati ndaziva kuti chii chisingachinjiki chandichinja ichi; asi ndinoziva kuti mumuviri wemunhu uyu, wandinoziva mukati menguva dzangu dzekumuka, pane chimwe chinhu chinoziva; chimwe chinhu chinonzwa uye chishuwo nekufunga, asi izvo hazvichinje; chinhu chinoziva chinoda uye chinogombedzera muviri uyu kuti uite, asi zviri pachena kuti hausi iwo muviri. Zviripachena ichi chinhu chinoziva, chero chiri icho, ndiri ini. "
Nokudaro, nekufunga, iwe unouya kuzviona iwe usisiri semuviri ane zita uye mamwe maitiro akasiyana, asi semunhu anozviziva mumuviri. Munhu anozviziva mumuviri anonzi, mubhuku rino, muiti-mu-mu-muviri. Muiti-mu-mu-muviri ndiyo nyaya iyo bhuku iri rinonyanya kunetseka. Iwe zvino uchawana zvichibatsira, sezvaunenge uchiverenga bhuku, kuzvifunga iwe somuiti wakaitwa; kuti uzvione iwe somunhu asingafi mumuviri womunhu. Sezvaunodzidza kuzvifunga iwe semuiti, semuiti mumuviri wako, uchava kutora danho rinokosha kuti unzwisise chakavanzika chako iwe nevamwe.
Iwe unoziva muviri wako, uye kune zvimwe zvose zvezvisikwa, kuburikidza nehutano. Izvo chete kuburikidza nemishonga yemuviri wako waunokwanisa zvachose kushanda munyika yepanyama. Iwe unoshanda nekufunga. Kufunga kwako kunokurudzirwa nemanzwiro ako uye chido chako. Manzwiro ako uye kuda nekufungisisa nguva dzose zvinoratidzira mumabasa emuviri; Basa rekuita kwepanyama rinongova kutaura chete, kubwinya, kwebasa rako romukati. Mumuviri wako nemafungiro ayo ndiyo chiridzwa, iyo inogadziriswa, iyo inokurudzirwa nemanzwiro ako uye chido; iyo ndiyo mhando yako chaiyo chaiyo.
Njere dzako zvipenyu; zvisingaonekwi zvikamu zvezvisikwa-nyaya; aya masimba anotanga anozadza chimiro chose chemuviri wako; izvo zvinhu izvo, kunyangwe zvisina njere, zvinoziva semabasa adzo. Pfungwa dzako dzinoshanda senzvimbo, dzinofambisa dzekuratidzira pakati pezvinhu zvakasikwa nemuchina wevanhu wauri kushanda. Manzwiro acho vamiririri venyaya kudare rako. Mumuviri wako nepfungwa dzake hadzina simba rekushanda nekuzvidira; hapana kupfuura girovhosi rako raunokwanisa kunzwa nekuita. Asi, iro simba ndiwe, mushandisi, unozviziva iwe, muiti akaitwa.
Pasina iwe muiti, muchina haugone kuita chero chinhu. Izvo zvinoitika zvega zvemuviri wako - iro basa rekuvaka, kugadzirisa, kugadzirisa matishu, zvichingodaro - kunoitwa otomatiki nemuchina wekufema wega sezvo uchishanda pamwe nekubatana neakakura muchina wekuchinja. Iri basa rekuita zvakasikwa mumuviri wako riri kugara richikanganiswa, zvisinei, nekusafunga kwako uye kusaenzana: iro basa rakashatiswa uye rakashayikwa kusvika padanho rekuti iwe unokonzeresa nekuparadza kusagadzikana kwemuviri nekushushikana nemanzwiro ako nezvishuwo zvekuita pasina kuzvidzora. Naizvozvo, kuitira kuti zvisikwa zvibvumidzwe kugadzirisa muchina wako pasina kupindira kwepfungwa dzako uye nemanzwiro, zvinopihwa kuti nguva nenguva urege; hunhu mumuviri wako hunopa kuti chisungo chinokubata iwe nepfungwa pamwe chete pane dzimwe nguva chakasununguka, zvishoma kana zvakakwana. Kuzorora uku kana kurega kwepfungwa kurara.
Kana muviri wako wakarara iwe haugone kubata nawo; neimwe nzira iwe uri kure nazvo. Asi nguva yega yega paunomutsa muviri wako unobva watoziva kuti ndiwe "ini" wawaive usati wabva mumuviri wakarara. Muviri wako, kunyangwe wakamuka kana kurara, hapana chaunoziva, zvachose. Izvo zvinoziva, izvo zvinofunga, ndiwe pachako, muiti uri mumuviri wako. Izvi zvinova pachena paunofunga kuti haufunge kana muviri wako wakarara; zvirinani, kana iwe uchifunga panguva yekurara iwe hauzive kana kurangarira, paunomutsa muviri wako pfungwa, zvawanga uchifunga.
Kurara kungave kwakadzika kana kurota. Kurara zvakadzama ndiyo mamiriro maunopinda mukati mako, uye mauri kunze kwekubata nepfungwa; ndiyo mamiriro ayo pfungwa dzakamira kushanda semhedzisiro yekudamburwa kubva pasimba raanoshanda naro, nderipi simba ndiwe, muiti. Kurota ndiyo mamiriro enzvimbo yakasarudzika; mamiriro ekushandurwa kwepfungwa dzako kubva kuzvinhu zvekunze zvechisikwa kuti zvishande mukati mezvisikwa, zvichiita zvine chekuita nenyaya dzezvinhu izvo zvinoonekwa panguva yekumuka. Kana, mushure menguva yekurara kwakadzika, paunopinda zvakare mumuviri wako, iwe pakarepo unomutsa pfungwa uye wotanga kushanda kuburikidza nadzo zvakare semunhu akangwara wemuchina wako, anogara achifunga, achitaura, uye achiita sekunzwa-uye- shuwa zvauri. Uye kubva mutsika yehupenyu hwese iwe unobva wazvizivisa iwe uye nemuviri wako: "ndanga ndakarara," unoti; "izvozvi ndamuka."
Asi mumuviri wako uye kunze kwemuviri wako, zvimwe wakamuka uye wakarara zuva nezuva; kuburikidza nehupenyu uye kuburikidza nerufu, uye kuburikidza nehurumende mushure mekufa; uye kubva kuhupenyu kuenda kuhupenyu kuburikidza nehupenyu hwako hwese - hunhu hwako uye kunzwa kwako kwekuzivikanwa kunoramba kuripo. Kuzivikanwa kwako chinhu chaichoicho, uye kugara uripo newe; asi chakavanzika icho ungwaru hwomunhu husinganzwisise. Kunyangwe iyo isingakwanise kubatwa nepfungwa iwe zvisinei unoziva nezvekuvapo kwayo. Iwe unozviziva sekunzwa; une kunzwa kwekuzivikanwa; kunzwa kweI-ness, kwekuzvida; iwe unonzwa, pasina mubvunzo kana kuzvishora, kuti iwe uri wega wakasarudzika wega unoramba uchirarama kuburikidza nehupenyu.
Iyi manzwiro ehupo hwekuzivikanwa kwako ndeyechokwadi zvokuti haugoni kufunga kuti iwe iwe mumuviri wako unogona kuva chero umwe kunze kwako; iwe unoziva kuti iwe nguva dzose unofanana newe, unoramba uchizvipira iwe, iwe muiti mumwe chete. Paunoisa muviri wako kuzorora uye kurara iwe haugoni kufunga kuti chimiro chako chichasvika pakuguma mushure mokunge musununguka kubata mumuviri wenyu uye regai kuenda; iwe unotarisira zvizere kuti kana iwe zvakare uchinge waziva mumutumbi wako uye uchitanga zuva idzva rebasa mauri, iwe ucharamba uine iwe, iwe pachako, iwe muiti mumwe chete.
Sezvo nehope, saizvozvo nerufu. Rufu runongova kurara kwenguva refu, kubviswa kwenguva pfupi kubva munyika ino yevanhu. Kana panguva yekufa iwe unoziva manzwiro ako e-I-ness, ekuzvimirira, iwe panguva imwechete unozoziva kuti nguva refu yekurara yerufu haigoni kuchinja kupfurikidza kwehuzivi hwako chero kupfuura husiku hwako hweusiku hunovhiringidza . Iwe uchanzwa kuti kuburikidza neramangwana risingazivikanwi iwe uchaenderera mberi, kunyange sezvawakaramba uchiita zuva rimwe nerimwe kuburikidza noupenyu huri kungoguma. Ichi iwe pachako, iwe iwe, unoziva muupenyu hwako hwehupenyu huno, ndihwo iwe pachako, iwe iwe, wakanga uchiziva kugara kwezuva nezuva kuburikidza neumwe wehupenyu hwako hwekare.
Kunyangwe yako yakareba kare isingazivikanwi kwauri ikozvino, hupenyu hwako hwepakutanga pasi pano hausi chishamiso chikuru pane hupenyu huno huripo. Mangwanani oga oga pane chakavanzika chekudzoka kuchirwere chako chinorara kubva kwauri-usinga-kuziva-kupi, kupinda mairi nenzira yako-hausi-kuziva-sei, uye zvakare kuziva nyika ino yekuzvarwa uye rufu uye nguva. Asi izvi zvakaitika kakawanda, zvave zvakadaro zvakasikwa zvakasikwa, zvokuti hazviiti sechinhu chakavanzika; iyo inowanzoitika. Asi hazvisi zvakasiyana nedzimwe nzira yaunofamba nayo apo, pakutanga kwekuvapo kwega kwega, iwe unopinda mutumbi mutsva wakagadzirirwa iwe nechisikirwo, wakadzidziswa uye wakagadzirirwa nevabereki vako kana vatarisi sevanhu vako vatsva kugara munyika, chimiro chitsva semunhu.
Unhu ihwo hunoita, mask, kuburikidza nayo iyo muimbi, muiti, anotaura. Saka zvinopfuura muviri. Kuti uve unhu muviri wemunhu unofanira kuve wakamuka nekuvapo kwemuiti mauri. Muhupenyu hunogara huchichinja-chinja muiti anoita nekutakura unhu, uye kuburikidza nayo inoita uye inotaura sezvainoita chikamu chayo. Sehuhu unhu muiti anofunga nezvayo seunhu; ndiko kuti, masquerader anozvifunga pachake sechikamu chainoita, uye anozvikanganwa pachayo seiye asingazivi kuti haasingafi mumasikisi.
Izvo zvinodikanwa kuti unzwisise nezve kuvezve kurarama uye magumo, zvimwe hazvigoneke kuzvidavirira mutsauko muhunhu hwehunhu nehunhu. Kusimbisa kuti kusaenzana kwekuzvarwa uye kwekumira, kwehupfumi nehurombo, hutano uye kurwara, zvinokonzerwa netsaona kana mukana kuzvidza mutemo nekutonga. Uyezve, kuti ungwara, hunyanzvi, kugona, zvipo, hunyanzvi, masimba, kunaka; kana, kusaziva, kusaziva, kushaya simba, usimbe, huipi, uye hukuru kana hudiki hwehunhu mune izvi, sekubva kunzanga yemuviri, zvinopesana nepfungwa dzakanaka uye kufunga. Nhaka ine chekuita nemuviri; asi hunhu hunoitwa nekufunga kwemunhu. Mutemo nekutonga zvinotonga nyika ino yekuzvarwa neyekufa, zvikasadaro haigone kuenderera munzira dzayo; uye mutemo nekururamisira zvinokunda munyaya dzevanhu. Asi kushanda hakuwanzo tevera chikonzero. Kudyara hakuteedzerwe nekukohwa. Saizvozvowo, mhedzisiro yechiito kana chekufunga chingasaoneka kusvika mushure menguva refu yekupindira. Hatigone kuona zvinoitika pakati pekufunga nechiito nemhedzisiro yazvo, sekugona kwatingaita kuona zviri kuitika muvhu pakati pekudyara nguva nekukohwa; asi yega yega mumuviri wemunhu inogadzira mutemo wayo seyakagadzirirwa nezvainofunga uye nezvavanoita, kunyangwe zvingave zvisingazive painenge ichitema mutemo; uye haizive chete kuti mushonga unozadziswa riini, semagumo, mune ino kana mune ramangwana hupenyu pasi pano.
Zuva nehupenyu hwese zvakangofanana; inguva dzinodzokororwa dzehupenyu hunoramba huripo umo muiti anoshandira magumo aro uye anoenzanisa nhoroondo yake yemunhu nehupenyu. Husiku nerufu, zvakare zvakafanana. Paunotsvedza kuti muviri wako uzorore uye uvete, unoenda muchiitiko chakafanana chaizvo neicho chaunopfuura nacho kana uchisiya muviri parufu. Zviroto zvako zvehusiku, zvakare, zvinofanirwa kufananidzwa neyakaitika-kufa nyika iyo yaunogara uchipfuura: ese ari maviri matanho ezviito zvezviito zvemuiti; mune zvese iwe unorarama pamusoro pemafungiro ako akamuka nezviito, pfungwa dzako dzichiri kushanda mune zvakasikwa, asi mune zvemukati mamiriro ezvisikwa. Uye nguva yehusiku yehope huru, apo masimba haachashandi - mamiriro ekukanganwa umo pasina ndangariro yechinhu - inoenderana nenguva isina chinhu yaunomirira pachikumbaridzo chenyika yepanyama kusvika panguva iyo iwe batanidza nepfungwa dzako mumuviri mutsva wenyama: muviri wevacheche kana muviri wemwana wakagadzirirwa iwe.
Paunotanga hupenyu hutsva iwe unofunga, sekuda. Iwe unonzwa kuti iwe uri chinhu chakasiyana uye chakajeka. Iyi manzwiro e-I-ness kana kuzvifunga ndiyo imwe chete chinhu chaicho chaunofunga kwenguva yakareba. Zvose zvinoshamisa. Kwenguva yakati iwe unofara, zvichida unotambudzika, nemuviri wako wisinganzwisisiki uye nzvimbo isingazivikanwi. Asi sezvaunodzidza kushandisa masimba ako uye kushandisa masimba ayo unowedzera zvishoma nezvishoma kuziva iwe pachako. Uyezve, iwe unodzidziswa nevamwe vanhu kuti unzwe kuti muviri wako iwe pachako; iwe wakaitwa kuti unzwe kuti iwe uri muviri.
Saizvozvowo, sezvo iwe uchiuya kakawanda pasi pekutonga kwemashoko emumuviri wako, unowedzera zvishoma kuti iwe uri chimwe chinhu chakasiyana nemuviri waunotora. Uye apo iwe uchikura kubva pauduku iwe ucharasikirwa nekubata nezvose zvinenge zvisinganzwisisiki nemanzwi, kana kuti zvinogoneka maererano nemafungiro; iwe uchange uine mujeri mupfungwa munyika yepanyama, unongorangarira chete zviitiko, zvekunyengera. Pasi pemitemo iyi iwe unenge uri chinyaradzo cheupenyu hwako iwe pachako.
Chakavanzika chakakura ndihwo Hwako chaihwo - Hukuru hwakanyanya uhwo husiri mumuviri wako; kwete mune ino yenyika yekuzvarwa neyekufa; asi izvo, zvichinyatsoziva kusafa muKazara kweKugara kwePermanence, ndiko kuvapo newe mukati mehupenyu hwako hwese, kuburikidza nekwako kwese kwekurara uye kufa.
Kutsvaga kwehupenyu hwese kwemunhu kwechinhu chichagutsa chiri muchokwadi kuda kweAko Chaiye Chaiye; hunhu, hunhu uye hunhu, izvo chimwe nechimwe chisinganyatso kuziva nezvacho, uye chinonzwa uye chishuwo kuziva. Nekudaro iyo chaiyo Yega inofanirwa kuzivikanwa seYoga-ruzivo, iyo chaiyo kunyangwe isingazivikanwe chinangwa chekutsvaga kwevanhu. Iko kusingaperi, kukwana, kuzadzikiswa, uko kunotarisirwa asi kusingawanikwe muhukama hwevanhu uye nesimba. Kupfuurirazve, iye Chaiye wega anogara aripo chipangamazano uye mutongi anotaura mumoyo sehana nebasa, sekururamisa uye kufunga, semutemo nekutonga - pasina iyo munhu angangopfuura mhuka.
Ikoko kune Kuzvipira kwakadaro. Izvo ndeyomutatu weTunune, mubhuku rino rakadanwa nokuti ichinhu chisingaoneki chimwe cheumwe munhu mumwechete: chemuzivi, chikamu chekufunga, uye chikamu chinoita. Chero chikamu chemuiti wechikamu chinogona kupinda mumuviri wemhuka uye kuita muviri iwoyo munhu. Chikamu ichocho chakafanana ndizvo zviri pano zvinonzi muiti-mu-mu-muviri. Mumunhu wese ari muiti akafananidzwa chikamu chisingaverengeki cheTatu Chayo Self, icho chiri chikamu chakasiyana pakati pevamwe vaSelune Selves. Vafungidziri uye vanoziva zvikamu zveMutatu weMuviri wega wega ndevokusingaperi, nyika yekusingaperi, iyo inopararira iyi nyika yedu yevanhu yekuzvarwa uye rufu nenguva. Muiti-mu-mu-muviri unotungamirirwa nemanzwi uye nemuviri; saka hazvikwanise kuve nechokwadi chezvokwadi yezvenguva dzose dzekufunga uye dzinoziva zvikamu zveTurune Self yayo. Izvo zvinorasikirwa nazvo; izvo zvinokanganisa maziso zvinopofumadza, mavhiri enyama anozvitora. Hazvioni kudarika mhando dzemagariro; iyo inotya kuzvisunungura pachayo kubva kumativi emaviri, uye imire uri yoga. Apo muiti wakaitwa anozviratidza pachake achida uye akagadzirira kubvisa kunaka kwechirevo chinoratidzira, mupfungwa yake uye anoziva nguva dzose akagadzirira kupa Chiedza panzira inoenda kuzviziva. Asi muiti akafanirwa mukutsvaga mufungidziri uye anoziva anotarisa kune imwe nyika. Chinozivikanwa, kana Chaicho Chaicho, chave chiri chisinganzwisisiki pakufunga kwevanhu mumarudzi ose ehupenyu.
Plato, anogona kunge ari mukurumbira uye mumiriri wevazivi veGirisi, anoshandiswa sechirevo kuvateveri vake muchikoro chake cheuzivi, iyo Academy: "Ziva wega" - gnothi seauton. Kubva pane zvaakanyora zvaizoita sekunge aive nekunzwisisa kweiye Chaiye, kunyange pasina rimwe remazwi raakashandisa rakashandurwa muChirungu sechinhu chero chakaringana kupfuura "mweya". Plato akashandisa nzira yekubvunza nezve kuwanikwa kweiye Chaiye. Kune hunyanzvi hukuru mukushandisa kwehunhu hwake; mukugadzira zviitiko zvake zvinoshamisa. Nzira yake ye dialectics iri nyore uye yakadzika. Muverengi ane husimbe hwepfungwa, uyo angangoda kuvaraidzwa pane kudzidza, angangofunga Plato anonetesa. Zviripachena kuti nzira yake yemutauro yaive yekudzidzisa pfungwa, kugona kutevera nzira yekufunga, uye kusakanganwa mibvunzo nemhinduro muhurukuro; kumwe munhu angatadza kutonga mhedziso dzakasvikwa munharo. Chokwadi, Plato anga asingadi kupa iye mudzidzi neruzivo rwakawanda. Zvingangodaro kuti aida kuranga pfungwa mukufunga, kuitira kuti nekufunga kwake iye avhenekerwe uye atungamirirwe neruzivo rwechinhu chake. Iyi, iyo nzira yeSocrates, inzira yediallectical yemibvunzo ine hungwaru nemhinduro izvo zvikateverwa zvinonyatso batsira munhu kudzidza kufunga; uye mukurovedza pfungwa kufunga zvakajeka Plato akaita zvakanyanya zvimwe kupfuura chero mumwe mudzidzisi. Asi hapana zvinyorwa zvakaburukira kwatiri umo maanotaurira kufunga, kana kuti chii pfungwa; kana izvo Chaicho Chaicho chiri, kana nzira yekuziva nezvazvo. Mumwe anofanira kutarisa kumberi.
Dzidziso yekare yeIndia inopfupikiswa muchirevo chekuviga: "ndiwe ndiwe" (tat tvam asi). Dzidziso haina kujekesa, zvisinei, kuti "izvo" chii kana kuti chii iwe "iwe"; kana kuti nenzira ipi iyo iyo "iyo" na "iwe" zvine hukama, kana kuti dzinofanira kuzivikanwa sei. Asi kana mazwi aya aine chirevo anofanirwa kutsanangurwa nenzira dzinonzwisisika. Hunhu hwese uzivi hweIndia - kutora maonero akajairika ezvikoro zvepamusoro - zvinoita sekunge kuti mumunhu mune chinhu chisingafi chiri uye chinogara chiri chikamu chemunhu chimwe chechinhu chinoumbwa kana chinhu chepasirese, sekudonha yemvura yegungwa chikamu chegungwa, kana sekupenya ndiyo imwe ine murazvo mairi kwakatangira nekuve; uye, zvakare, kuti uyu munhu chimwe chinhu, uyu muiti akafanirwa - kana, sekutaurwa kwazvo muzvikoro zvepamusoro, atman, kana purusha, - akaparadzaniswa kubva kune chimwe chinhu chepasi rose kungori nechidzitiro chekunyepedzera kwepfungwa, maya , izvo zvinoita kuti muiti ari mumunhu azvifunge seakaparadzaniswa uye semunhu; nepo, vadzidzisi vachizivisa, hapana hunhu kunze kwechinhu chikuru chepasirese, chinonzi Brahman.
Dzidziso iri, zvakare, kuti zvidimbu zvakasanganiswa zveBrahman zvepasirese zvese zviri pasi pehupenyu hwevanhu uye kutambura kusinganzwisisike, vasingazivi kwavo kunofungidzirwa kuzivikanwa neBrahman wepasirese; akasungwa kune vhiri rekuzvarwa uye kufa uye kuiswazve chimiro mune zvakasikwa, kudzamara, mushure memazera marefu, zvidimbu zvese zvishoma nezvishoma zvichange zvabatanidzwazve muBrahman yepasirese. Chikonzero kana kukosha kana kudiwa kweBrahman yekufamba nenzira iyi inorwadza uye inorwadza sezvidimbu kana madonhwe hazvisi, zvakadaro, zvakatsanangurwa. Uye hazviratidzwe kuti iyo Brahman inofungidzirwa kuti yakakwana sei kana inogona kubatsirwa nayo; kana kuti chero zvidimbu zvacho zvinobatsira sei; kana kuti hunhu hunobatsirwa sei. Hupenyu hwese hwevanhu hungaratidzika kunge chiitiko chisina basa pasina poindi kana chikonzero.
Zvakangodaro, nzira inoratidzwa neiye munhu akakodzera, anotsvaga "kuzviparadzanisa," kana "kusunungurwa" kubva muhusungwa hwepfungwa huripo kuzvisikwa, anogona nesimba rekushinga kubva pachimiro, kana fungidziro yezvakasikwa, oenda kumberi kupukunyuka kubva pane zvakasikwa. Rusununguko runofanirwa kuwanikwa, zvinonzi, kuburikidza nemitambo yeyoga; nekuti kuburikidza neyoga, zvinonzi, kufunga kunogona kuve kwakarairwa zvekuti iye atman, purusha - muridzi wemitambo - anodzidza kudzvinyirira kana kuparadza manzwiro nezvishuwo zvake, uye anoparadza pfungwa dzekunyepedzera idzo kufunga kwadzo kwave kure ; nekudaro ichisunungurwa kubva pakukosha kwekuenderera mberi kwehupenyu hwevanhu, inozopedzisira yadzoswazve muBrahman yepasirese.
Mune izvi zvese pane zvisaririra zvechokwadi, uye nekudaro pane zvakawanda zvakanaka. Iye yogi anodzidza zvechokwadi kudzora muviri wake uye kuranga manzwiro ake uye zvishuwo. Anogona kudzidza kudzora pfungwa kusvika padanho raanogona, pakuda kwake, kuziva mamiriro ezvinhu zvemukati kune izvo zvinowanzoonekwa nepfungwa dzevanhu dzisina kudzidziswa, uye nekudaro anogona kupihwa mukana wekuongorora nekuziva nyika dzezvisikwa izvo zvakavanzika kuvanhu vazhinji. Anogona, zvakare, kusvika padanho repamusoro rekugona pamusoro pemamwe masimba ezvisikwa. Zvese izvo pasina mubvunzo zvinomisikidza munhu akasiyana nehukuru hwakawanda hwevasina kuraira vanoita. Asi kunyangwe hazvo iyo yoga ichitsvaga ku "sunungura," kana "kuzviparadzanisa," munhu akazvimiririra kubva mukunyepedzera kwepfungwa, zvinoita sezviri pachena kuti haatombo tungamira mumwe kupfuura muganhu wechisikigo. Izvi zviri pachena nekuda kwekusanzwisisa zvine chekuita nepfungwa.
Pfungwa iyo yakadzidziswa mu yoga ndiyo pfungwa-pfungwa, njere. Ndiyo chimbo chaicho chemuiti chinorondedzerwa mumapeji akazotevera semafungiro emuviri, pano akaparadzaniswa kubva kune mamwe mafungiro maviri iye zvino asati asarudzwa: pfungwa dzekunzwa uye kuda kwemuiti. Pfungwa dzomuviri ndiyo chete nzira iyo muiti akafanirwa anogona kuita kuburikidza nemanzwiro ayo. Kushanda kwemafungiro emuviri kunongopedzisira kuenderana nemafungiro, uye naizvozvo zvakanyanya kune zvakasikwa. Kuburikidza naro munhu anoziva zvinhu zvose muzvinhu zvaro zvinoshamisa chete: nyika yenyika, yezvinyengeri. Nokudaro, kunyange zvazvo mudzidzi achirovedza pfungwa dzake, panguva imwechete inoonekwa kuti iye achiri kutarisana nemafungiro ake, achiri kukanganisa mumasikirwo echisikigo, asingasunungurwi kubva pane zvinodikanwa zvekugara zvakare mune miviri yevanhu. Muchidimbu, zvisinei nokuti munhu anoita zvakanaka angave akaita semutambo wemuviri waro, haugoni kuzviparadzanisa kana kuzvisunungura kubva pane zvakasikwa, haagoni kuwana ruzivo rwega kana kuti rweUye chaiyo, nekufunga nemafungiro emuviri chete; nokuti nyaya dzakadaro dzinongogara dzisinganzwisisiki kune unyanzvi, uye dzinogona kunzwisiswa chete kuburikidza nekushanda kwakanyatsorongeka kwemuviri wemafungiro ne pfungwa dzekunzwa uye chido.
Izvo hazviratidzike kunge pfungwa dzekunzwa uye dzechishuwo dzakatariswa mune eEastern masisitimu ekufunga. Humbowo hweizvi hunowanikwa mumabhuku mana ePatanjali's Yoga Aphorisms, uye mune akasiyana akataurwa nezve iro rekare basa. Patanjali anogona kunge ari iye anoremekedzwa kwazvo uye mumiriri wevazivi veIndia. Zvinyorwa zvake zvakadzama. Asi zvinoita sekunge zvinoita kuti dzidziso yake yechokwadi yakarasika kana kuchengetwa yakavanzika; yezvakanaka zvisinganzwisisike sutras zvine zita rake zvinoita sekushungurudza kana kuita kuti zvisakwanise icho chinangwa chavanenge vakagadzirirwa. Kupokana kwakadai kunogona kuramba kusingabvunzwe kuburikidza nemazana emakore kunotsanangurwa chete muchiedza cheizvo zvinoiswa mune ino neanozotevera zvitsauko maererano nekunzwa uye chishuwo mumunhu.
Dzidziso yekuMabvazuva, sedzimwe huzivi, ine chekuita nechakavanzika chekuziva pachako mumuviri wemunhu, uye chakavanzika chehukama pakati peiye wega nemuviri wake, nehunhu, uye zvakasikwa zvizere. Asi vadzidzisi veIndia havaratidzi kuti ivo vanoziva icho ichi chinozviziva - iyo atman, purusha, muridzi wemuridzi - iri, seyakasiyana nemasikirwo: hapana musiyano wakajeka unoitwa pakati pemuiti-mumuviri uye muviri unova wechisikigo. Kukundikana kuona kana kuratidza uyu musiyano kuri pachena nekuda kwekusanzwisisika kwepasirese kana kusanzwisisa kwekunzwa uye chishuwo. Izvo zvinodikanwa kuti kunzwa uye chishuwo zvinotsanangurwa panguva ino.
Kukurukurwa kwekunzwa nekuchiva kunotanga imwe yezvinyanya kukosha uye zvakasvika kune zvidzidzo zviri mubhuku rino. Zvarinoreva uye kukosha hazvikwanise kuvekwe. Kunzwisisa uye kushandiswa kwekunzwa nekuchiva kunogona kureva kushanduka kwekufambira mberi kwevanhu uye kwevanhu; iyo inogona kusunungura vanoita kubva pakufunga kwenhema, zvitendero zvenhema, zvinangwa zvenhema, izvo zvavakazvichengetera murima. Iyo inopesana nechitendero chenhema chakange chave chichigamuchirwa zvakashata; rutendo rwakave rwakadzika midzi mumafungiro evanhu avo sezviri pachena kuti hakuna munhu anofunga kubvunzurudza.
Izvi ndezvizvi: Wese munhu akadzidziswa kutenda kuti manzwiro emuviri ari mashanu muhuwandu, uye iko kunzwa ndiko kumwe kwekunzwa. Iyo pfungwa, sezvakataurwa mubhuku rino, zvikamu zvehunhu, zvisikwa zvisikwa, vanoziva semabasa avo asi vasina njere. Kune pfungwa ina chete: kuona, kunzwa, kuravira, uye kunhuwidza; uye panzwisiso yega yega pane nhengo inokosha; asi hapana nhengo yakakosha yekunzwa nekuti kunzwa - kunyangwe ichinzwa kuburikidza nemuviri - haisi yemuviri, kwete yemasikirwo. Icho chimwe chezvinhu zviviri zvemuiti. Mhuka dzinonzwawo uye dzinoshuva, asi mhuka ndedzinogadziriswa kubva kumunhu, sekutsanangurwa kwazvinoitwa mberi.
Izvozvi zvinofanira kunge zvichitaura nezvechido, chimwe chiitiko chemuiti. Kunzwa nekuchiva kunofanira kuonekwa nguva dzose, nokuti hazviparadzanisi; uye haigoni kuvapo kunze kweumwe; iyo yakafanana nemapuranga maviri emagetsi emagetsi, kumativi maviri emari. Nokudaro bhuku rino rinoshandisa izwi rechimiro: kunzwa-uye-kuda.
Kunzwa-uye-chido chemuiti isimba rakangwara iro chimiro nemweya zvinosunungura. Icho chiri mukati memasimba ekusika ari kwose kwose aripo; kunze kwayo iyo upenyu hwaizoguma. Kunzwa-uye-chido ndiko kutanga kwekusika uye kusingaperi kwezvinhu zvekusika izvo zvinhu zvose zvinonzwisisika, zvakagadzirwa, zvakagadzirwa, zvinobudiswa, uye zvinodzorwa, kana kuburikidza nehurumende yevanhu vanoita mumiviri yevanhu kana yevaya vari veHurumende yenyika, kana yeIntelligences huru. Kunzwa-uye-chido chiri mukati memabasa ose akangwara.
Mumumuviri wemunhu, kunzwa-uye-chishuwo isimba rekuziva iro rinoshanda uyu wega muchina muchina. Hapana kana imwe yenzwi ina - inonzwa. Kunzwa, chinoitika chemuiti, ndechekuti mumuviri unonzwa, uyo unonzwa muviri uye unonzwa zvimiro zvinopfuudzwa kumuviri nezviya zvina, sekunzwa. Kupfuurirazve, inogona mumatanho akasiyana kuona manzwiro epamusoro, senge manzwiro, mamiriro, fungidziro; inogona kunzwa chakanaka nechakaipa, uye inogona kunzwa yambiro yehana. Chido, chinhu chinoshanda, isimba rekuziva rinofambisa muviri mukuzadziswa kwechinangwa chemuiti. Muiti uyu anoshanda panguva imwe chete muzvinhu zviviri izvi: nekudaro chishuwo chose chinomuka kubva mukunzwa, uye kunzwa kwese kunounza chishuwo.
Iwe uchange uri kutora danho rinokosha munzira yekuziva iwe unozviziva mumuviri kana iwe uchifunga iwe semanzwiro anonzwisisika aripo kuburikidza nehutano hwako hwekuzvidira, zvakasiyana nemuviri waunofunga, uye pamwe chete semasimba anoziva chekuda kupfuurira kuburikidza neropa rako, asi izvo zvisiri ropa. Kunzwa-uye-kuda kunofanira kugadzirisa pfungwa zvina. Kunzwisiswa kwenzvimbo uye basa rekunzwa-uye-chido ndicho chikonzero chekubva kune zvitendero izvo kwemazana emakore zvakakonzera vanoita mumunhu kuti vafunge ivo pachavo sevanhu venyama. Nekunzwisisa uku kwekunzwa-uye-nechido mumunhu, uzivi hweIndia hunogona kuenderera mberi nekutenda kutsva.
Dzidziso yekuMabvazuva inoziva chokwadi chekuti kuti uwane ruzivo rwekuziva wega mumuviri, munhu anofanira kusunungurwa kubva mukufungidzira kwepfungwa, uye kubva pakufunga kwenhema nekuita kunoguma nekutadza kudzora zvaunonzwa nezvido zvako. . Asi hazvipfuure zvisizvo zvisirizvo fungidziro yekuti kunzwa ndiko kumwe kwekunzwa kwemuviri. Pane kupokana, vadzidzisi vanotaura kuti kubata kana kunzwa ipfungwa yechishanu; chishuwo ichocho chemuviri; uye kuti zvese kunzwa uye chishuwo zvinhu zvehunhu mumuviri. Zvinoenderana neiyi fungidziro, zvinonzi purusha, kana atman - muiti, anonzwa-uye-chishuwo - anofanirwa kudzvinyirira zvachose kunzwa, uye anofanira kuparadza zvachose, "kuuraya," kuda.
Muchiedza chezvinhu zvakaratidzwa pano pamusoro pekunzwa-uye-kuda, zvinenge zvingaita sokuti dzidziso yeEast inokurudzira zvisingaiti. Munhu asingagoni kuparara asingazvifi mumuviri haagoni kuzviparadza pacharo. Kana zvaive zvichibvira kuti muviri wemunhu upfuurire kurarama usina kunzwa-uye-kuda, muviri unenge uchinge uchinge uchinge usingafariri.
Kunze kwekusanzwisisa kwavo kwekunzwa-uye-chishuwo vadzidzisi veIndia havape humbowo hwekuva neruzivo kana nzwisiso yeTriune Self. Mune chirevo chisingatsanangurike: "ndiwe ndiwe," zvinofanirwa kufungidzirwa kuti iye "iwe" ari kutaurwa ndiye atman, purusha - iye munhu akazvimiririra; uye kuti iyo "iyo" iyo iyo "iwe" yaanozivikanwa ndeyako wepasirese kuzvimiririra, Brahman. Hapana musiyano unoitwa pakati pemuiti nemuviri wake; uye nekudaro pane kuenderana kutadza kusiyanisa pakati peyese Brahman neyakajairika zvisikwa. Kubudikidza nedzidziso yeBrahman wepasirese sosi uye mugumo wevose vakazvimiririra, mamirioni evaiti vevachengeti vakachengetwa mukusaziva kwavo kwaVo chaiko; uyezve zvasvika pakutarisira, kunyangwe kushuvira, kurasikirwa muBrahman yepasirese icho chiri icho chinhu chakakosha kwazvo icho chero munhu angave nacho: chako kuzivikanwa chaiko, wega wega wega wega wega, pakati pevamwe vanhu vasingafe.
Kunyange zvazvo zviri pachena kuti Eastern philosophy inotarisira kuchengetedza muiti akabatana nemasikirwo, uye mukusaziva kweAvo chaiyo chaiyo, inoratidzika isinganzwisisi uye haigoneki kuti dzidziso idzi dzingadai dzakatangwa mukusaziva; kuti vangadai vakapfuurirwa nechinangwa chekuchengetedza vanhu kubva muchokwadi, uye saka vachizviisa pasi. Pane kudaro, zvinonyanya kuitika kuti maitiro akange aripo, zvisinei kunyange ekare angave ari, anongova zvipfeko zvekugadzirisa zvehurumende yakare yakakura yakabva kune dzakabudirira yakanyangarika uye yakananga kukanganwa: dzidziso ingangodaro yakanyatsojekesa; iyo manzwiro anozivikanwa achifunga-uye-nechido semunhu asingafi-mu-mu-muviri; izvo zvakaratidza muiti nzira yekuziva zivo Yayo chaiyo. Izvo zvikamu zvezvemafomu aripo zvinoratidza mikana yakadaro; uye kuti munguva iyo yekare dzidziso yepakutanga isinganzwisisiki yakapa nzira yekudzidzisa dzidziso yeBrahman yepasi rose uye dzidziso dzinofungidzira dzinogona kuita kuti mweya usingafi-uye-chishuwo sechinhu chisingadikanwi.
Kune hupfumi husina kuvanzika zvachose: Iyo Bhagavad Gita, inonyanya kukosha pamatombo eIndia. Iparera reIndia kupfuura mutengo. Chokwadi chakapihwa naKrishna kuna Arjuna chakanyanya, chakanaka, uye chisingaperi. Asi iyo iri kure nguva yenhoroondo umo mutambo unoiswa uye unobatanidzwa, uye dzidziso dzekare dzeVedic umo chokwadi chayo chakafukidzwa uye chakafukidzwa, zvinoita kuti zvinyanye kutinetsa kuti tinzwisise kuti vatambi Krishna naArjuna ndevapi; kuti zvakabatana sei; chii hofisi yeumwe neumwe kune imwe, mukati kana kunze kwemuviri. Dzidziso mumitsetse inoremekedzwa iyi yakazara nerevo, uye inogona kuve yakakosha kwazvo. Asi yakasangana uye yakavharidzirwa nedzidziso dzechinyakare nedzidziso dzezvinyorwa zvekuti kukosha kwayo kunenge kwakavanzika zvachose, uye kukosha kwayo kwakadzikira.
Nekuda kwekushayikwa kwese kwekujekesa mufilosofi yekuMabvazuva, uye nenyaya yekuti zvinoita kunge zvinopokana segwara rekuziva kwako wega mumuviri uye neYako chaiye, dzidziso yekare yeIndia inoita kunge isina chokwadi uye isingavimbike. . Mumwe anodzokera kuMadokero.
NezvechiKristu: Mhedzisiro chaiye uye nhoroondo yechiKristu ndeyekudzikama. Zvinyorwa zvakawanda zvakakura kubva mumazana emakore ekuedza kutsanangura kuti dzidziso idzi ndei, kana kuti chii chavakaronga kuva. Kubva pamavambo ekutanga pane dzidziso zhinji yekudzidzisa; asi hapana zvinyorwa zvakaburuka zvinoratidza ruzivo rwezvakange zvakarongwa uye zvakadzidziswa pakutanga.
Mifananidzo uye zvirevo zviri muEvhangeri zvinopa humbowo hwehukuru, kureruka, uye chokwadi. Asi kunyangwe kunyangwe avo vakatanga kupihwa meseji nyowani vanoita sevasina kuinzwisisa. Mabhuku acho akananga, haana kuitirwa kutsausa; asi panguva imwechete vanotaura kuti kune chirevo chemukati chinova chevasanangurwa; dzidziso yakavanzika yaisatarirwa munhu wese asi "kune wese anotenda." Zvirokwazvo, mabhuku akazara nezvakavanzika; uye zvinofanirwa kufungidzirwa kuti vanovhara dzidziso iyo yaizivikanwa kune vashoma vakatanga. Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene: izvi zvakavanzika. Zvakavanzika, zvakare, Ndiko Kusachena Kwekuberekwa uye kuzvarwa uye hupenyu hwaJesu; saizvozvowo kuroverwa kwake, kufa, uye nekumuka kwake. Zvakavanzika, zviri pachena, ndezve kudenga negehena, uye dhiabhori, uye neHumambo hwaMwari; nekuti hazviite kuti zvidzidzo izvi zvaifanirwa kunzwisiswa nepfungwa, kwete sezviratidzo. Zvakare, mumabhuku ese mune mitsara nematemu izvo zviri pachena kuti hazvifanirwe kutorwa sezvazviri chaizvo, asi nenzira yekuvanzika; uye zvimwe zviri pachena zvinogona kuve nezvakakosha chete kumapoka akasarudzwa. Zvakare, hazvina musoro kufunga kuti mifananidzo neminana zvaigona kunge zvakabatana sechokwadi chaicho. Zvakavanzika mukati mese - asi hapana kwazvinoziviswa zvakavanzika. Chii chiri chakavanzika ichi chose?
Chinangwa chiri pachena cheEvhangeri kudzidzisa kunzwisiswa uye kurarama kwehupenyu hwepamoyo; hupenyu hwemukati hunogona kumutsiridza muviri wemunhu uye nokudaro kukunda rufu, kudzoreredza muviri wenyama kuhupenyu husingagumi, iyo mamiriro ayo anonzi akadonha - "kudonha" kwayo kuri "chivi chekutanga." Pane imwe nguva panofanira kuve pakave neyakajeka sisitimu yekuraira iyo yaizojekesa chaizvo kuti munhu angararama sei hupenyu hwemukati hwakadai: kuti munhu angaite sei, kuburikidza nekuita kudaro, kupinda muruzivo rweMunhu chaiyeiye. Kuvapo kwedzidziso yepachivande yakadaro kunoratidzwa muzvinyorwa zvekutanga zvechiKristu nenongedzero kuzvakavanzika nezvakavanzika. Zvakare zvinoita sezviri pachena kuti mifananidzo iyi zvirevo, fananidzo: nyaya dzinoitirwa uye zvirevo zvekutaura, zvinoshanda sedzimotokari dzekungoburitsa kwete chete mienzaniso yetsika nedzidziso dzetsika, asiwo zvokwadi zvemukati, zvekusingaperi sezvikamu zvehurongwa hwakajeka hwekudzidzisa. Zvakadaro, Evhangeri, sezvazviri nhasi, hadzina kubatana uko kungadikanwa kuumba hurongwa; izvo zvauya kwatiri hazvina kukwana. Uye, zvine chekuita nezvakavanzika zvinofungidzirwa kuti dzidziso dzakadai dzakavanzwa, hapana kiyi inozivikanwa kana kodhi yakapihwa kwatiri yatingavhure kana kutsanangura nayo.
Anogonesa uye akajeka mutsananguri wedzidziso dzekutanga dzatinoziva nezvaPauro. Mazwi aakashandisa anga achiitirwa kujekesa zvaanoreva kune avo vaainyorerwa; asi izvozvi zvinyorwa zvake zvinoda kuturikirwa maringe nezuva ranhasi. "Tsamba yekutanga yaPauro kuvaKorinte," chitsauko chegumi neshanu, inonongedzera nekuyeuchidza dzimwe dzidziso; mimwe mirau yakanangana nezve kurarama kwehupenyu hwemukati. Asi zvinofungidzirwa kuti dzidziso idzodzo dzaive dzisina kuzvipira kunyora - izvo zvaizoratidzika senge zvinonzwisisika - kana zvimwe zvikarasika kana kuti zvakasiiwa muzvinyorwa zvakadzika. Pazviitiko zvese, "Nzira" haina kuratidzwa.
Sei chokwadi icho chakapiwa nenzira yekusanzwisisika? Chikonzero chacho chingave chakanga chiri chokuti mitemo yenguva yakarambidzwa kupararira kwezvidzidzo zvitsva. Kupararira kwekudzidzisa kusingazivikanwi kana dzidziso ingadai yakarangwa norufu. Zvechokwadi, nheyo ndeyekuti Jesu akatambura rufu nekurovererwa kwekudzidzisa kwake kwechokwadi uye nzira uye hupenyu.
Asi nhasi, zvinonzi, kune rusununguko rwekutaura: munhu anogona kutaura asingatyi kufa izvo zvaunotenda maererano nezvakavanzika zvehupenyu. Izvo chero munhu anofunga kana kuziva nezvebumbiro uye mashandiro emutumbi wemunhu uye neanoziva wega anogara mairi, chokwadi kana maonero ayo munhu angave nawo maererano nehukama pakati pehumwe muviri uye Hwake chaihwo, uye nezve nzira yekuziva- -izvi hazvifanirwe kuvanzwa, nhasi, mumashoko echakavanzika anoda kiyi kana kodhi kuti vanzwisise. Munguva dzemazuvano "mazano" uye "mapofu," zvese "zvakavanzika" uye "mavambo," mumutauro wakasarudzika wakavanzika, zvinofanirwa kuve humbowo hwekusaziva, kuzvikudza, kana kushambadzira kwakashata.
Asi zvisinei zvikanganiso uye kupesana uye mapoka ezvitendero; zvisinei nokuti kududzirwa kwakasiyana-siyana kwezvirevo zvaro zvisinganzwisisiki, chiKristu chakapararira kumativi ese enyika. Zvichida kupfuura zvimwe zvitendero, dzidziso dzaro dzakabatsira kuchinja nyika. Panofanira kuva nechokwadi mune dzidziso, zvisinei kuti zvingave zvakavanzwa, izvo, kwemakore anenge zviuru zviviri, zvasvika mumoyo yevanhu uye zvakamutsa Hupenyu mukati mavo.
Chokwadi chisingaperi chiri muhupenyu muHumambo, muHumambo huri huwandu hwevose vanoita mumitumbi yevanhu. Izvozvi chokwadi hazvikwanise kupedzwa kana kukanganwa zvachose. Mune zvipi zvezera, mune chero upi zvake mafiroso kana kutenda, chokwadi chinozoonekwa uye chinobudirira, chero chipi zvacho chavanoshandura mafomu.
Imwe mafomu umo mamwe eaya maidi akakandwa ndeye Freemasonry. Iko kurongeka kweMason kwakare senge rudzi rwevanhu. Ine dzidziso dzine ukoshi hukuru; chikuru kwazvo, kutaura zvazviri, kupfuura chinoyemurwa neMason vanova ndivo vanovachengeta. Iwo marongero akachengetedza zvidimbu zvekare zvemashoko akakosha zvine chekuita nekuvakwa kwemuviri wekusingaperi kune uyo anoziva asingafi. Mutambo waro wepakati wakavanzika une chekuita nekuvakwa kwetembere iyo yakaparadzwa. Izvi zvakakosha kwazvo. Tembere mucherechedzo wemuviri wemunhu uyo ​​murume anofanira kuvaka zvakare, kumutsidzira, kuita muviri wenyama unozove wekusingaperi, wekusingaperi; muviri unove pekugara wakakodzera kune iye zvino anoziva asingafi. "Shoko" iro "rakarasika" ndiye muiti, akarasika mumuviri waro wemunhu - matongo eiimbove tembere huru; asi izvo zvinozozviwana zvoga semuviri unovandudzwa uye muiti achizvidzora.
Iri bhuku rinounza kwauri Chiedza chakawanda, Chiedza chakawanda pane kufunga kwako; Chiedza kuti uwane yako "Nzira" kuburikidza nehupenyu. Chiedza icho chinounza, zvisinei, hachisi chiedza chechisikigo; iChiedza chitsva; nyowani, nekuti, kunyangwe zvave zviripo newe, iwe hauna kuzviziva. Mumapeji aya anonzi Chiedza cheConscious mukati; ndicho Chiedza chinogona kukuratidza zvinhu sezvazviri, Chiedza cheUngwaru chawakabatana nacho. Imhaka yekuvapo kweChiedza ichi kuti unokwanisa kufunga mukugadzira pfungwa; pfungwa dzekukusunga iwe kuzvinhu zvakasikwa, kana kukusunungura kubva kuzvinhu zvakasikwa, sekusarudza uye kuda kwako. Kufunga chaiko ndiko kubata kwakadzikama uye kutarisisa kweChiedza cheConscious mukati panenyaya yekufunga. Nekufunga kwako unoita rako ramangwana. Kufunga chaiko ndiyo nzira yekuziva kwako. Izvo izvo zvinokwanisa kukuratidza nzira, uye zvinogona kukutungamira munzira yako, ndicho Chiedza cheUngwaru, Chiedza Chekuziva chiri mukati. Muzvitsauko zvinotevera zvinotaurirwa mashandisiro anoita Chiedza ichi kuti uve neChiedza chakawanda.
Bhuku rinoratidza kuti pfungwa ndeyezvinhu chaiye, zvisikwa zvechokwadi. Zvinhu chete zvechokwadi izvo munhu anogadzira ndeye pfungwa dzake. Bhuku rinoratidza maitiro epfungwa ayo pfungwa dzinosikwa; uye kuti pfungwa dzakawanda dzinoramba dziripo kudarika muviri kana huropi kuburikidza nezvavari kusikwa. Zvinoratidza kuti pfungwa dzomunhu dzinofunga ndidzo dzinokwanisa, zvinyorwa zvebhuruu, zvigadzirwa, maitiro kubva paanovaka zvinhu zvinooneka izvo zvaakashandura chiso chechisikwa, uye akaita izvo zvinonzi nzira yake yekurarama uye civilization. Mafungiro ndiwo mazano kana maitiro akasiyana uye apo marudzi akavakwa uye akachengetedzwa uye akaparadzwa. Bhuku rino rinotsanangura kuti maonero asina kuoneka evanhu anowedzera sei sezviitiko uye zvinhu uye zviitiko zvehupenyu hwake hwega uye humwe, achigadzirira mugumo wake kuburikidza nehupenyu hupenyu huri pasi pano. Asi zvinoratidzawo kuti munhu angadzidze kufunga sei pasina kusika pfungwa, uye nekudaro anozvidzora pachake.
Izwi refungwa sezvinowanzoshandiswa ndiro izwi rinosanganisira-rose rinoshandiswa kushandiswa kune marudzi ese ekufunga, zvisarudzo. Zvinowanzofungidzirwa kuti murume uyu ane pfungwa imwe chete. Zvechokwadi zvitatu zvakasiyana uye zvakasiyana, pfungwa, iyo, nzira dzekufunga neChinhu Chiedza, dziri kushandiswa nemuiti akaitwa. Izvi, zvakataurwa kare, ndezvi: pfungwa yemuviri, pfungwa-pfungwa, uye pfungwa-chido. Pfungwa ndiyo kushanda kwezvinhu zvinonzwisisika. Saka pfungwa haisi kushanda pasina kuzviita. Kushanda kweumwe neumwe wevatatu mafungiro kunobva pane zvakafanana-ne-chido, muiti.
Pfungwa yemuviri ndiyo iyo inowanzotaurwa nezvayo sepfungwa, kana pfungwa. Iko kushanda kwekunzwa-uye-chido semusununguri wezvisikwa zvenyama, sekushanda kwemuchina wemuviri wemunhu, uye naizvozvo kune pano inonzi mupfungwa yemuviri. Ndiyo pfungwa chete inotarisirwa uye iyo inoshanda muchikamu pamwe uye kuburikidza nemanzwi emuviri. Nokudaro ndiyo chiridzwa nenzira iyo muiti anoziva uye anogona kuita mukati uye mukati uye kuburikidza nezvenyaya yepanyika.
Iko pfungwa-pfungwa uye chido-pfungwa ndezvekushanda kwekunzwa uye kwechido pasinei kana kuti kune chokuita nenyika yepanyama. Aya mafungiro maviri anenge ava kunyatsoputira mukati uye akadzivirirwa uye akaiswa pasi nepfungwa dzomuviri. Saka zvese kufungidzira kwevanhu kwakagadzirwa kuti kuwirirane nemafungiro emafungiro emuviri, ayo anonamatira muiti kune zvisikwa uye anodzivisa kufunga kwaro sechimwe chinhu chakasiyana kubva mumuviri.
Iko izvo nhasi zvinonzi psychology haisi sayenzi. Mafungiro ezuva ranhasi ave achitsanangurwa sekudzidza kwehupenyu hwevanhu. Izvi zvinofanirwa kutorwa kuti zvinoreve kuti ndiko kuongorora kwezvinhu kubva kune zvinhu uye simba rezvisikwa zvinoitwa kuburikidza nemanzwiro pamusoro pemagetsi evanhu, uye kupindura kwehutano hwevanhu kune zvakaratidzwa zvakagamuchirwa. Asi izvi hazvirevi zvepfungwa.
Ikoko hakugoni kuva nemhando ipi neipi yepfungwa sezvakaitwa nesayenzi, kusvikira pane rumwe rudzi rwekunzwisisa kuti chii chinonzi psyche, uye chinyi pfungwa; uye kujekesa kwemaitiro ekufunga, kwekuti pfungwa dzinoshanda sei, uye yezvinokonzera nemigumisiro yekushanda kwayo. Nyanzvi dzepfungwa dzinobvuma kuti havazivi kuti zvinhu izvi ndezvipi. Pamberi pepfungwa yepamusoro inogona kuva yesainzi yechokwadi panofanira kuva nekumwe kunzwisisa kwekushanda kunoenderana kwevatatu vatano vomuiti. Iyi ndiyo nheyo iyo inogona kusimbiswa nesayenzi yechokwadi yepfungwa uye yehukama hwevanhu. Mune mapeji aya inoratidzwa kuti manzwiro uye chido zvakananga zvakananga kune zvepabonde, achitsanangura kuti mumunhu manzwiro ekunzwa anotungamirirwa nechido uye kuti mumukadzi chido chekuda chinotungamirirwa nekunzwa; uye kuti mumunhu wose kushandiswa kweiyo ikozvino kwakanyanyisa muviri-pfungwa kunowanzoenderana nemumwe kana mumwe weizvi, maererano nehupombwe hwomuviri mavari kushanda; uye inoratidzirwa, zvakare, kuti hukama hwose hwevanhu hunoenderana nekushanda kwemuviri-pfungwa dzevarume nevakadzi muhukama hwavo kune umwe neumwe.
Nyanzvi dzemazuva ano dzezvepfungwa dzinofarira kusashandisa izwi rekuti mweya, kunyange hazvo rave richinyanyo shandiswa mururimi rweChirungu kwemazana emakore mazhinji. Chikonzero cheichi ndechekuti zvese zvakataurwa maererano nezviri mweya kana zvaunoita, kana chinangwa chaunoshandira, zvave zvisina kujeka, kusahadzika uye kuvhiringidza, kupa mvumo yesainzi yenyaya. Panzvimbo iyoyo, vezvepfungwa vakatora semusoro wenyaya yavo yekudzidza yemunhu muchina wemhuka nemaitiro ayo. Yakagara ichinzwisiswa uye ichibvumiranwa nevanhu zvakawandisa, zvisinei, kuti munhu akaumbwa ne "muviri, mweya, nemweya." Hapana anokahadzika kuti muviri imhuka here? asi maererano nemweya nemweya pakave nekusahadzika kukuru uye fungidziro. Pamusoro pezvinhu zvakakosha izvi bhuku iri rakajeka.
Bhuku rinoratidza kuti mweya mupenyu chinhu chaicho uye chaicho. Inotaridza kuti chinangwa chayo uye mashandiro ayo akakosha kwazvo muchirongwa chepasirese, uye kuti haiparare. Zvinotsanangurwa kuti icho chakadaidzwa mweya mweya wechisikirwo - chinhu chepakutanga, chinhu chechimwe chinhu; uye kuti ichi chinoziva asi chisina njere chinzvimbo chiri chemberi pane ese masisitimu emasikirwo mukuumbwa kwemuviri: ndicho chikamu chepamusoro chemuviri musangano, chafambira mberi kune iro basa mushure mekudzidzira kwenguva refu mumabasa mashoma mashoma inosanganisira zvisikwa. Kuve nokudaro kuwanda kwemitemo yese yezvisikwa, chikamu ichi chinokodzera kuita senge otomatiki maneja wezvakasikwa mumuviri wemunhu mashandiro; sekudaro inoshumira munhu asingafi kuburikidza nekuvapo kwayo kwese nekuita nguva nenguva kuvaka muviri mutsva wenyama kuti muiti apinde mairi, uye nekugadzirisa uye kugadzirisa iwo muviri kwenguva yakareba sekunge mugumo wemuiti ungade, sekugadzwa nemuiti kufunga.
Iyi unit inonzi mweya-fomu. Izvo zvinoshanda zvefema-fomu ndiyo mweya; mweya ndiwo mweya, mweya, wemuviri; iyo inoputika yose yakarongeka. Chimwe chimiro chefomu-kufema, chimiro chekusiya, chimiro kana mufananidzo, muenzaniso, chimiro, maererano nechimiro chemuviri chaiyo chakavakirwa mukati muoneka, kuoneka kuripo nekuita kwemweya. Nokudaro zvikamu zviviri zvefomu-kufema zvinomiririra hupenyu uye chimiro, uye chimiro chiripo.
Nokudaro mazwi okuti munhu anoumba muviri, mweya, uye mweya anogona nyore kunzwisiswa sekuti zvinoreva kuti muviri wenyama unoumbwa nechinhu chakakomba; kuti mweya mweya womuviri, mweya yekufema, mweya weupenyu; uye kuti mweya ndiwo maitiro emukati, muenzaniso usingaperi, wegadziriro inooneka; uye nenzira iyo iyo mweya mhenyu ihwo hupenyu hunogara husingaperi hunogadzira, hunochengetedza, hunogadzirisa, uye hunovakazve muviri wenyama wevanhu.
Iyo mafomu-kufema, mune zvimwe zvikamu zvekushanda kwayo, inosanganisira iyo inyanzvi yepfungwa inonzi pfungwa dzisinganzwisisiki, uye isingazivi. Inotarisira hurongwa hwekutya husingaiti. Mune basa iri inoshanda maererano nemaonero ayo anogamuchira kubva pane zvakasikwa. Inotakurawo mafambiro ezvokuzvidira emuviri, sezvakataurwa nemafungiro emuiti-mu-mu-muviri. Nokudaro inoshanda sechinhu chisina maturo pakati pezvisikwa uye musingafi mutorwa mumuviri; an automaton achiona zvisinganzwisisiki kune zvinokonzerwa nezvinhu uye simba rezvisikwa, uye kufunga kwemuiti.
Muviri wako ndizvo chaizvo mugumisiro wekufunga kwako. Chero zvingave zvichiratidza zvehutano kana chirwere, unozviita nekufunga kwako uye kunzwa uye kushuvira. Muviri wako uripo wenyama uri kutaura kwemweya wako usingafe, chimiro chako chekufema; nekudaro ndiko kunongedzerwa kwepfungwa dzevakawanda vehupenyu. Icho chinyorwa chinoonekwa chekufunga kwako nezviito semuiti, kusvika parizvino. Muchokwadi ichi mune hutachiona hwekugona kwemuviri uye kusafa.
Hapana chinhu chinoshamisa kwazvo nhasi muchirevo chokuti munhu rimwe zuva achasvika pakuziva kusafa; kuti pakupedzisira achawanazve humwe hwakakwana kubva kwaakawira pakutanga. Dzidziso yakadaro mumhando dzakasiyana-siyana yave iripo ikozvino kuMadokero kwemakore anenge zviuru zviviri. Mukati iyo nguva yakapararira kuburikidza nenyika kuitira kuti mazana emamiriyoni evanoita, zvakare avepo pasi pano kuburikidza nemazana emakore, akaunzwa mukubatana nguva dzose nechinangwa se chokwadi chiri mukati. Kunyangwe pachinenge chichiri kunyatsonzwisisa zvishoma, uye zvisati zvishoma kufungisisa nezvazvo; kunyange yakanyengerwa kugutsa manzwiro uye zvishuvo zvevanhu vakasiyana; uye kunyange zvingave zvichionekwa nenzira dzakasiyana-siyana nhasi nekusava nehanya, kutendeseka, kana kutya, pfungwa yacho chikamu chenguva yakawanda yefungiro yezuva ranhasi Humanity, uye naizvozvo yakakodzera kufungisisa.
Zvimwe zvinotaura mubhuku rino, zvisinei, zvingangoita sezvisinganzwisisiki, kunyange zvakanakisa, kusvikira pfungwa yakakwana yapiwa kwavari. Nemuenzaniso: pfungwa yokuti muviri wemunhu unogona kuve usina kuora, usingagumi; inogona kuchinjwa uye kudzorerwa kune imwe nyika yeukwana uye hupenyu husingaperi kubva kune iyo yakaita kare yakaita kuti iwa; uye, zvakare, pfungwa yokuti iyo yehutano uye hupenyu husingaperi inofanira kuwanikwa, kwete mushure mekufa, kwete mune imwe nzvimbo iri kure nebulous hereafter, asi mune zvenyama apo mumwe ari mupenyu. Izvi zvingangoita sezvisinganzwisisiki zvikuru, asi kana zviongororwa nenjere hazvingaratidzika sezvisinganzwisisiki.
Chii chisinganzwisisiki ndechokuti muviri wenyama wemunhu unofanira kufa; zvisati zvisinganzwisisiki chirevo chokuti kungofa chete kuti munhu ararame nekusingaperi. Masayendisiti ave akambotaura kuti hapana chikonzero nei hupenyu hwemuviri husingafaniri kutambanidzwa nekusingaperi, kunyange zvazvo husingarevi kuti izvi zvinogona kuitwa sei. Zvechokwadi, miviri yevanhu yakagara iri pasi pekufa; asi vanofa nekuda kwekuti hapana kuedza kwakanaka kwakaitwa kuti vadzokezve. Mune bhuku iri, muchitsauko Great Way, zvinotaurwa kuti muviri unogona kugadziriswa sei, unogona kudzorerwa kuhutano hwakakwana uye hunoitwa tembere yeTune Self Self.
Simba repabonde ndechimwe chakavanzika chinofanira kugadziriswa nemunhu. Chinofanira kunge chiri chikomborero. Panzvimbo pezvo, munhu kazhinji anozviita muvengi wake, dhiyabhorosi, anogara ainaye uye waasingatize kubva pairi. Iri bhuku rinoratidza mashandisiro aro, nekufunga, kurishandisa sesimba guru pane zvakanaka zvarinofanira kuve; uye sei nekunzwisisa uye kuzvidzora kumutsiridza muviri uye kuzadzisa zvinangwa zvemunhu uye zvinangwa mumatanho anofambira mberi ekuita.
Munhu wese chakavanzika chakavanzika: chakavanzika chake, uye chakavanzika chemuviri waari. Mutumbi ndiyo kiyi, uye ndiye kiyi mukiyi. Chinangwa chebhuku rino ndechekukuudza kuti ungazvinzwisise sei iwe sekiyi yechakavanzika chako pachako; kuti uzviwane sei mumuviri; maitiro ekutsvaga nekuziva yako chaiyo Yega seYoga-ruzivo; mashandisirwo ako sekiyi yekuvhura iro rinova muviri wako; uye, kuburikidza nemuviri wako, kuti unzwisise nekuziva zvakavanzika zvechisikigo. Iwe uri mukati, uye ndiwe unoshanda, wega muchina wemuchina wezvakasikwa; inoshanda uye inoita pamwe uye nehukama nehunhu. Paunogadzirisa zvakavanzika zvako wega semuiti weYako Kuziva-ruzivo uye anoshanda wemuviri wako muchina, iwe unozoziva - mune yega yega ruzivo uye zvachose - kuti mashandiro ezvikamu zvemuviri wako mitemo yechisikigo. Iwe unozobva waziva inozivikanwa uye zvakare isingazivikanwe mitemo yechisikigo, uye kugona kushanda mukuwirirana neyakakura zvisikwa muchina kuburikidza neayo ega muviri muchina mauri iwe.
Imwe chakavanzika nguva. Nguva inogara iripo sehurukuro yakajairika yekukurukurirana; asi kana munhu akaedza kufungisisa nezvazvo uye kuti anotaura kuti chii chaizvoizvo, chinova chisingazivikanwi, chisingazivikanwi; haigoni kubatwa, mumwe anokundikana kuinzwisisa; iyo inoputika, inopukunyuka, uye iri kupfuura imwe. Izvo hazvina kutsanangurwa.
Nguva ndiyo shanduko yemayuniti, kana ehukuru hweyuniti, muhukama hwavo kune mumwe nemumwe. Iyi dudziro yakapusa inoshanda kwese kwese uye pasi pese mamiriro kana mamiriro, asi inofanirwa kufungwa nezvayo uye kuiswa pamberi munhu asati ainzwisisa. Muiti anofanira kunzwisisa nguva achiri mumuviri, akamuka. Nguva inoita kunge yakasiyana mune mamwe nyika uye matunhu. Kune anoziva anoita nguva inoita kunge isinga fanane nekumuka senge uchirota, kana kurara hope huru, kana kana muviri wafa, kana uchipfuura nemamiriro ekufa, kana kumirira chivakwa nekuzvarwa muviri mutsva iyo ichagara nhaka pasi. Imwe neimwe yenguva dzenguva ine "Pakutanga," akateedzana, uye magumo. Nguva inoita sekukambaira muhudiki, kumhanya muhudiki, uye mujaho mukumhanya nekukurumidza kusvika parufu rwemuviri.
Nguva ndiyo dandemutande reshanduko, rakarukwa kubva kusingagumi kuenda kumuviri wemunhu unoshanduka. Mucheka wakarukwa pawebhu ndiyo fomu yekufema. Iyo yemuviri-pfungwa ndiyo inogadzira uye inoshandisa iyo loom, spinner yewebhu, uye muruki wevheiri dzinonzi "yapfuura" kana "iripo" kana "ramangwana". Kufunga kunogadzira nguva, kufunga kunotenderera nguva yenguva, kufunga kuruka zvivharo zvenguva; uye muviri-pfungwa ndiwo unofunga.
HANA ndechimwe chakavanzika, chikuru uye chakadzama pane zvakavanzika zvese. Izwi rekuti Kuziva rakasiyana; ishoko rakaumbwa reChirungu; yakaenzana nayo haioneki mune mimwe mitauro. Yayo yakakosha-kukosha uye kukosha hazvisi, zvakadaro, zvinokosheswa. Izvi zvichaonekwa mumashandisirwo anoitwa izwi kushandira. Kupa mimwe mienzaniso yakajairika yekushandisa kwayo zvisirizvo: Inonzwika mumataurirwo akadai se "kuziva kwangu," uye "kuziva kwemunhu"; uye mune dzakadai sekuziva mhuka, kuziva kwevanhu, panyama, psychic, cosmic, uye mamwe marudzi ekuziva. Uye inotsanangurwa seyakajairika kuziva, uye yakakura uye yakadzika, uye yakakwirira uye yakadzika, yemukati nekunze, kuziva; uye izere uye yakasarudzika kuziva. Kutaurwa kunonzwikwawo nezve kutanga kwehana, uye neshanduko yekuziva. Mumwe anonzwa vanhu vachiti ivo vakasangana kana kukonzera kukura, kana kuwedzerwa, kana kuwedzerwa, kwekuziva. Kushandiswa kusingaenzaniswi kwakajairika kweshoko kuri mumitsara yakadai seiyi: kurasikirwa nekuziva, kubatirira mukuziva; kudzorera, kushandisa, kukudziridza kuziva. Uye mumwe anonzwa, zvakare, nezve dzakasiyana nyika, uye ndege, uye madhigirii, uye mamiriro ekuziva. Kuziva kwakanyanya kukura kuti ugone kukwaniswa, kushomeka, kana kurayirwa. Nekuda kwechinhu ichi bhuku iri rinoshandisa chirevo ichi: kuziva, kana se, kana mukati. Kutsanangura: chero chinhu chinoziva chingangove kuziva zvimwe zvinhu, kana sezvazviri, kana kuziva mune chimwe chinhu degree rekuziva.
Kuziva ndeyekupedzisira, kwekupedzisira Kwechokwadi. Kuziva ndeyekuti kuburikidza nehupo hwezvinhu zvose zvinoziva. Chakavanzika chezvinhu zvose zvakavanzika, hazvisi kunzwisisika. Pasina chinhu hapana chinogona kuziva; hakuna munhu aigona kufunga; kwete, hapana sangano, hapana simba, hapana chikwata, chinogona kuita chero basa. Asi Kuziva pachako hakuiti basa: hariti kuita nenzira ipi zvayo; ndiko kuvapo, kwose kwose. Uye ndeyekuvapo kwaro kuti zvinhu zvose zvinoziva chero zvingave zvavanoziva. Kuziva hachisi chikonzero. Haikwanise kushandiswa kana kushandiswa kana nenzira ipi neipi inobatwa nechinhu chero chipi zvacho. Kuziva hachisi chikonzero chechinhu chipi nechipi, uye hazvibvi pane chimwe chinhu. Haiti kukura kana kuderedza, kuwedzera, kuwedzera, kontrakiti, kana kuchinja; kana kuchinja nenzira ipi zvayo. Kunyange zvazvo kune zviyero zvisingaverengeki pakuziva, hakuna madigiri eChinhu chekuziva: kwete ndege, hapana dhomwe; kwete zvikwereti, kupesana, kana kuchinja kwemarudzi ose; iyo yakafanana kose-kose, uye muzvinhu zvose, kubva pane chimwe chinhu chakakosha kusvika kune Supreme Intelligence. Kuziva hakune zvinhu, kwete unhu, kwete zviyeuchidzo; hauna; haigoni kutorwa. Kuziva hakuna kumbotanga; haigoni kurega kuva. Kuziva IS.
Muhupenyu hwako hwese hwepanyika wanga uchitsvaga zvisingatsanangurike, kutarisira kana kutsvaga mumwe munhu kana chimwe chinhu chirikushaikwa. Iwe unofunga zvisina tsarukano kuti kana iwe uchikwanisa asi kuwana icho chaunoshuvira, iwe unenge uchigutsikana, uchigutsikana. Ndangariro dzakadzima dzemazera dzinokwira; ndiwo manzwiro aripo ezvakakanganwa zvakapfuura; ivo vanomanikidza inodzokororwa yepasi rose-kuneta kweye inogara ichikuya treadmill yezviitiko uye yekusava nebasa uye kusava nebasa kwekuedza kwevanhu. Iwe unogona kunge wakatsvaga kugutsa iko kunzwa nemhuri, newanano, nevana, pakati peshamwari; kana, mune bhizinesi, hupfumi, ruzivo, kuwanikwa, kubwinya, chiremera, uye simba - kana nechero chipi chakavanzika chemwoyo wako. Asi hapana chinhu chendangariro chinganyatsogutsa chishuwo icho. Icho chikonzero ndechekuti iwe warasika - chikamu chakarasika asi chisinga patsanurike cheicho chinoziva chisingafi Triune Self. Makore apfuura, iwe, sekunzwa-uye-chishuwo, chikamu chemuiti, wakasiya anofunga uye anoziva zvikamu zveTriune Self yako. Saka iwe waive warasika kune iwe pachako nekuti, pasina kumwe kunzwisiswa kwako kweTatu Utatu, haugone kuzvinzwisisa iwe, kushuva kwako, uye kwako kurasikirwa. Naizvozvo wakambonzwa kusurukirwa. Iwe wakanganwa zvikamu zvakawanda zvawakagara uchiridza munyika ino, sehunhu; uye iwe wakanganwa zvakare iyo chaiyo runako uye simba rawaive uchiziva iwe uchinge uine wako anofunga uye anoziva muDunhu rePermanence. Asi iwe, semuiti, shuwa kubatana kwakaringana kwekunzwa kwako-uye-chishuwo chako mumuviri wakakwana, kuitira kuti uvezve neako anofunga uye anoziva zvikamu, seTriune Self, muDare rePermanence. Muzvinyorwa zvekare pakave nekufungidzirwa kwekubva ikoko, mumitauro yakadai se "chivi chekutanga," "kudonha kwemunhu," sekubva kunzvimbo nenzvimbo iyo munhu anogutsikana. Iyo mamiriro uye nzvimbo yawakabva kwairi haigone kumira kuva; inogona kuwanikwazve nevapenyu, asi kwete mushure mekufa kwevakafa.
Haufaniri kunzwa uga. Mufumi wako uye muzivi wako anewe. Pamusoro pegungwa kana musango, pamakomo kana pachena, muzuva kana mumvuri, mune boka revanhu kana muga; chero iwe uripo, iwe kunyatsofunga uye kuziva Uno uri newe. Your real Self ichakuchengetedza, kusvika ikozvino iwe uchazvibvumira kuchengetedzwa. Mufumi wako uye muzivi wako vakambogadzirira kudzoka kwako, zvisinei nokuti zvingatora nguva yakareba sei kuti uwane uye uchitevera nzira uye ugozopedzisira uchitaridzika kumba kumba kwavo seTunune Self.
Panguva ino iwe hauzove, iwe haugoni kuva, uchigutsikana nechinhu chipi nechipi pane Self-ruzivo. Iwe, sekunzwa-uye-chido, ndiwe anoita basa reTunune yako Self; uye kubva pane zvawakazviitira iwe sehupenyu hwako iwe unofanira kudzidza zvidzidzo zviviri zvese izvo zviitiko zvose zveupenyu zvinofanira kudzidzisa. Zvidzidzo izvi ndezvi:
Chii chisingafaniri kuitwa.
Iwe unogona kuisa izvi zvidzidzo kune hupenyu hwakawanda sezvaunoda, kana kuzvidzidza nekukurumidza sekuda kwako - ndiko kuti iwe utore; asi nekufamba kwenguva unozozvidzidza.
Kufunga Nekupedzisira ➔